Ihe ileta na agwaetiti Sardinia | Akụkọ Njem
Sardinia bụ agwaetiti nke akụkụ nke Italian Republic. Isi obodo ya bụ Cagliari na ọ bụ ebe njem nleta ama ama. Àgwàetiti Mediterenian nke na-enye anyị obodo Italiantali dị iche iche nwere ọtụtụ amara, kamakwa ọmarịcha osimiri na ọdịdị ala. Onga ezumike na Sardinia fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nrọ, n'ihi ya, anyị ga-echebara echiche nke ọma ebe ndị ahụ anyị chọrọ ịga ka anyị wee ghara ịhapụ ihe ọ bụla.
La isuo Sardinia bụ ebe anyị kwesịrị ileta ihe niile na udo. Amara ya abughi na obodo ya, kamakwa n'obodo nta ya na mpaghara okike ya, na coves na oke osimiri. Enwere ọtụtụ nkuku anyị nwere ike ịga ọ bụ ezie na anyị ga-arapara na ụfọdụ.
6 Osimiri na Sardinia
7 Ndị Maddalena
Onu ogugu nke Alghero nwere nnukwu akuko ma obu ihe choro Ọ bụ akụkụ nke okpueze Aragon n'oge iri na abụọ na narị afọ. Otu n’ime ihe anyị ga-ahụ n’obodo a bụ mgbidi ya na ụlọ elu ya. Ha bụ mgbidi na ụdị Aragonese nke Catalan, n'ihi ya ha nwere ike ịmara anyị nke ọma. Katidral nke Santa María sitere na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ nnukwu ụlọ okpukpe ya. N'ime ya anyị nwere ike ịghọta ụlọ ọrụ Gothic yana ụdị Catalan Renaissance. Obere obodo a nwere ike ịga na ụbọchị ole na ole nwere ọtụtụ n'okporo ámá ndị na-adọrọ mmasị ka ị funahụ na otu n'ime ndị a ma ama bụ Calle Humberto nwere ụlọ ochie dịka Casa Doria ma ọ bụ Palacio Curia. Ebe ndi ozo anyi puru ihu anya bu ihe omuma nke San Francisco na Port nke Alghero, otu n’ime ebe obibi ya.
Cagliari bụ isi obodo Sardinia na obodo kachasị ukwuu, na-eme ka ọ dị mkpa mgbe ị na-eleta agwaetiti ahụ. Anyị ga-agarịrị na saịtị ndị nnọchi anya ha, dị ka Lelọ nke San Michele na ebe kachasị elu ya. Ọ bụ ihe mgbidi nke narị afọ nke iri na anọ. N’àgwàetiti ahụ ọ bụ ihe a na-ahụkarị ebe e wuru mgbidi ndị ochie bụ́ ndị nyeere aka gbochie ndị ohi na ndị wakporo. Na Cagliari anyị na-ahụkwa ebe egwuregwu Roman na-eme egwuregwu site na narị afọ nke abụọ AD. C. Thelọ Elu nke Elephant bụ ihe ọzọ dị mkpa ọ na-arụ, o nwekwara ọnụ ụzọ ga-akpọga anyị agbataobi Castello yana ụfọdụ okporo ámá ndị mara mma. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ụfọdụ ọrụ, anyị ga-agbada n'ọdụ ụgbọ mmiri na Marina agbata obi, ebe enwere ụlọ ahịa na ụlọ nri. N'ikpeazụ, anyị kwesịrị ịbịa nleta na National Archaeological Museum ebe anyị nwere ike ịchọta ụdị mpempe akwụkwọ niile sitere na prehistory.
Ndị Carthagines ma ọ bụ ndị Rom gafere n’obodo Olbia. Obodo a dị oké mkpa, ọkachasị ebe ọ bụ na ọ dị na Costa Smeralda, otu n'ime ebe ndị ama ama na Sardinia. Na mgbakwunye na ọmarịcha osimiri ndị dị na mpaghara a anyị nwere ike ịhụ ihe ochie nke Abbas Cabu ma ọ bụ gaa na Ebe Ndebe Ihe Ochie ya iji mụtakwuo banyere akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ. E wuru Katidral Olbia na necropolis nke Rome ma malite na narị afọ nke XNUMX. Na Olbia, anyị ga-agakwa Corso Umberto I n'okporo ámá, ebe akwara ya, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ahịa na ụdị ntụrụndụ niile.
Castelsardo bụ otu n'ime ebe kachasị mma na Sardinia niile na ihe ozo di nkpa anyi kwesiri ileta. Ọ bụ ebe ndị njem nlegharị anya na ọ ka mma ịga ihe mbụ n'ụtụtụ iji nwee ike ịga ije na obere oghere ndị ahụ na ramp na steepụ ndị na-eduga na mpaghara dị elu nke nnukwu ụlọ. Taa, anyị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ ahịa ebe nchekwa na n'okporo ámá mara mma. Ọ bụ ezie na ọ bụ nnọọ njem nleta, ọ ka nwere ọmarịcha mma. Anyị agaghị agbaghara Katidral nke San Antonio Abad ma ọ bụ Castillo de los Doria.
Banyere oghere ndị sitere n'okike, ọ bara uru ịkọwapụta ya onye ama ama Gruta di Neptuno nke di nso Alghero. Ọ bụ oghere dị n'okike nke ị nwere ike ịga na nke ị ga-ahụ stalagtites na stalagmites. Seehụ n'ọgba ahụ nwere ike iji mmiri ma ọ bụ iji mmiri banye na mmiri. A na-atụ aro ahụmịhe abụọ ahụ, ebe anyị nwere ike ịhụ ọgba ahụ site n'akụkụ dị iche iche.
Osimiri na Sardinia
Ihe ọzọ anyị ga - eme na nleta na Sardinia bụ jiri ihu igwe dị mma mata ụfọdụ ụsọ mmiri ya kasị ama. N'ime ha bụ Lazzaretto dị nso na Alghero, Liscia Rujia na Costa Smeralda, osimiri La Pelosa n'akụkụ Alghero ma ọ bụ osimiri Pevero na Porto Cervo.
N'ihu nke Costa Smeralda bụ National Park nke La Maddalena otu agwaetiti nke nwere ihe karịrị agwaetiti iri isii na nke abụrụwo otu n’ime ebe ndị njem nlegharị anya na-aga iji nwee ọmarịcha osimiri. Nwere ike ịhụ ebe dịka Spiaggia Rosa, ụsọ osimiri nke a na-eji aja aja pink mara ya, ọ bụ ezie na a na-echekwa ya ugbu a ma enwere ike ịhụ ya anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ịga leta na Sardinia